App Outlet: Chitoro chepasi rose cheGNU / Linux zvinoshandiswa Kubva kuLinux
Outlet App chishandiso chinonakidza chinotibvumidza kuisa pakati penzvimbo ye Chitoro chepamhepo akasiyana uye anoshanda mafomu edu Mahara uye akavhurika mashandiro, zvichibva pane zvitsva uye zvakasiyana mafomati mafomati (Flatpak, Snap uye Appimage) iripo.
Naizvozvo Outlet App Kubva pakagadzirwa kwaro rakagadzirwa sechitoro chekushandisa chakafemerwa neyekare online sevhisi Linux App Chitoro (https://linuxappstore.io/) izvo hazvichashandi. Uyezve, inyore uye inoshamwaridzika interface inokubvumidza iwe kutsvagisa, kurodha pasi uye kumisikidza mafomu anomhanya pane akawanda kugoverwa kwe GNU / Linux.
Outlet App chishandiso chikuru chinotibvumidza izvozvi, kuti tirege kushanyira uye / kana kushandisa Webhu Zvitoro zvekushandisa pamhepo, senge:
Uye vamwe vanozivikanwa, zvakafanana chaizvo se:
Iro basa rinoshanda nekuisa iwo akaringana mafomu kana ekuwedzera-ons kuburikidza nechishandiso OCS-Url. Gare gare tichataura nezvezvimwe zvitoro ndokuti application OCS-Url.
1 App Outlet: Chitoro chepasirese chemaapp
App Outlet: Chitoro chepasirese chemaapp
To download Outlet App tinofanira kuenda kwake zviri pamutemo webhusaiti uye dhawunirodha mumhando yezvatinoda kana zvatinoda. Parizvino inowanikwa mune anotevera mafomati ekumisikidza:
.mufananidzo (68.2 MB)
Yedu yekudzidza nyaya, isu tinotora pasi pasuru mu .deb fomati yekumisikidza kuburikidza neterminal.
Kamwe pasuru yacho painotorwa mu .deb fomati isu tinoenderera mberi nekuiisa kuburikidza ne terminal uchishandisa iyo raira "dpkg", seinotevera:
Kamwe yaiswa, inogona kuurayiwa uchishandisa nzira ipfupi yakagadzirwa mu menyu chikamu «Zvishongedzo». Kana kubva kumagumo nekumhanyisa iyo raira "app-nzira yokubuda". Kana ikasaitwa nenzira yekutanga, zvinogona kuitwa nenzira yechipiri yekuona mhando yekukanganisa iyo iyo terminal inotiratidza.
Hongu nekumhanya unotevera kuraira:
Meseji yekukanganisa inoratidzwa:
Edza kumhanya inotevera mirairo:
Uye wozogadzirisazve rairo yekuraira:
Kana ikaitwa nemazvo kubva kune iyo terminal, ichaitwawo nenzira kwayo kubva kumenu. Raira mutsara sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone=1 inofanira kugara ichiurayiwa isati yaitwa, kunze kwekunge yakarongwa mu script kana rakarongwa basa pakutanga (kutanga) kwe Operating system.
Kamwe kuurayiwa uye kutanga pasina matambudziko Outlet App inotiratidza hwindo rine zvinhu zvinotevera:
Tsvaga bar: Kuti uwane kunyoreswa kunyorera nekufananidza yekutsvaga pateni ine zita rayo kana tsananguro.
Menyu: Iyo ine ina sarudzo idzo Imba, Zvikamu, Zvirongwa uye Batanidzwa.
Mapepa ekushandisa: Izvo zvinoratidza mitsara mitatu inonzi Yakakurumbira maficha (Akakurumbira maapplication), Achangobva kuvandudzwa (Achangobva kuvandudzwa) uye Nyowani kuburitswa (Nyowani nyowani).
Muchidimbu, mu Outlet App inotipa isu rakanakisa renji rezvikumbiro kuziva, kuisa uye kuyedza.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezve iyi inonakidza application inonzi «App Outlet», iyo inotibvumidza isu kuisa pakati mune nharaunda ye Chitoro chepamhepo akasiyana uye anoshanda mafomu edu «Sistemas Operativos Libres y Abiertos» zvichibva pane zvitsva uye zvakasiyana mafomati mafomati (Flatpak, Snap uye Appimage) kuwanikwa; kuva zvakawanda kufarira uye kushandiswa, Zvese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » App Outlet: Chitoro chepasirese cheGNU / Linux zvinoshandiswa
Mhoroi, nekushamisika munguva pfupi yapfuura ndakaedza kuyedza kunyorera muapplication
uye ini ndakawana chikanganiso chakafanana neicho iwe chaunotaura uye pakupedzisira ndakazoenda kuchiyedza, ini handina kutanga kuongorora kuti ungagadzirisa sei iro dambudziko futi.
Kukanganisa kupi kuri nekuda kwe? Ini ndinoona iri bummer kuti ndiite izvozvo kumhanyisa iko kunyorera. Haigone kugadziriswa neimwe nzira?
Kwazisai Jony127! Edza kumhanyisa ichi kana chimwe chishandiso "/ opt / App Outlet / app-outlet" –no-sandbox% U kubva pakudimbudzira kana terminal. Iyo-- no-sandbox sarudzo inodzivirira kutanga yatomhanya kuraira sudo sysctl kernel.unprivileged_userns_clone = 1
Ehe, nesarudzo iyoyo ini ndinogona kuitisa ndisina kushandisa chero yemirairo yapfuura, mubvunzo wangu ndewokuti, izvi zvinogona kukanganisa kuchengetedzeka kwesystem? Ini ndinonzwisisa kuti nemurairo iwoyo application irikumhanya pasina kushandisa sandbox kudzivirira.
Zvirokwazvo, kana iwe ukaimhanyisa kunze kweSandbox imwe inogona kuburitswa pakurwiswa, kunyangwe ndichifunga kuti kune mushandisi akajairika uye kunyanya kune mushandisi weGNU / Linux, mukana mudiki kwazvo, kunyange zvichikwanisika. Kune vamwe vese, ini ndichaenderera mberi ndichiongorora chikonzero uye mhinduro.
Kwazisai Jony127! Kana iwe uchireva iko kukanganisa uko kunogadziriswa neiyi yekuraira tambo:
Mushure mekuongorora chaizvo izvo zvinoruramisa kana kuti ndinozvigadzirisa sei, chokwadi ndechekuti ini handina kukwanisa kuwana chekutanga uye zvese zvandakaedza zvechipiri zvaive zvisina basa. Chero chipi zvacho, ngatitarisirei kuti mumwe muverengi anotiunzira mwenje neizvi.
Kutanga kwakagadzirwa kubatanidza basa pakati pekuvhuraSUSE Leap uye SUSE Linux Enterprise